Iindaba -Uyicoca njani ipeyinti nge-shear emulsifier ephezulu [qiangzhong Machinery]
Uphando lwethu kunye nophuhliso
Nkqo Colloid Mill JM-L
Yahlulahlula i-Colloid Mill JM-F
Horse oxwesileyo Mill Mill JM-W
Isitya sokufudumeza umbane
Emulsifier kunye noMxube
Shear ePhakamileyo Emulsifier
Isantya esasasazi esiphakamileyo
Umxhubi woTywala wePowder
Icebo lokucoca ulwelo Sanitary
Umbane wokuFudumeza uMbane
Icebo lokucoca iMicropore
Icebo lokucoca ulwelo kabini
Plate lokucoca ulwelo
Ucoceko lwemisele yamanzi
Ukufudumeza kunye nokupholisa iTanki
Itanki lokuxuba eline-single
Itanki lokuxuba iMagnetic
Itanki lokuxuba oomatshini
I-Shear kunye ne-Emulsification Tank
Umzi mveliso wesiselo
Uyilungisa njani ipeyinti ngeshear emulsifier ephezulu [qiangzhong Machinery]
Qiangzhong Oomatshini] I-emulsifier ephezulu yokucheba yamkela indibaniselwano eyenzelwe ngokukodwa iRotor kunye neStator. Ngaphantsi kwesantya esiphakamileyo sokuqhuba kweemoto, izinto eziza kulungiswa zifunxwe kwi-Rotor kwaye zithotyelwe kumakhulu amawaka ezenzo zokucheba ngexesha elifutshane. Ngexesha lenkqubo yokucheba, loo nto yahluliweyo, yacocwa yaza yasasazeka phantsi kokukhuhlana kwe-centrifugal kunye nefuthe lesantya esiphezulu kwisikhewu esichanekileyo phakathi kwerotor kunye ne-stator. Ngexesha elifanayo, ngenxa yamandla e-kinetic e-high-frequency machine, izixhobo zeepropati ezahlukeneyo zenza i-shear hydraulic eqinile. Umaleko wolwelo uhlikihla iinyembezi kwaye uyangqubana, ukuze loo nto isasazeke ngokupheleleyo, i-emulsified, i-homogenized kwaye inyibilike. Emva kokuba imathiriyeli iye yawa kwindibano ejikelezayo ye-stator ngesantya esiphezulu, i-emulsifier yaxhotyiswa ngesixhobo sokuhambisa kwakhona ukuqhubela phambili ukonyusa ukusebenza kwe-emulsification.
Inkqubo yokupeyinta ibhekisa kwinkqubo yokuhambisa okanye yokuguqula izinto ezingasetyenziswanga kunye neemveliso ezigqityiweyo zibe ziipeyinti ezigqityiweyo, eziqhele ukwenziwa kweenkqubo zeekhemikhali njengokuxuba, ukuhambisa, ukusasaza nokucoca. Ngokwesiqhelo, kuxhomekeke kudidi lwemveliso kunye neempawu zayo zokwenza imveliso, khetha kuqala into efanelekileyo yokusila nokusasaza izixhobo zomatshini, emva koko umisele inkqubo yesiseko.
Imveliso ukutyabeka ikakhulu inkqubo kwiintsali sombala. Ukuze ungeze i-pigment kwizinto ezisisiseko ukwenza umbala wepeyinti, kuyimfuneko ukusabalalisa i-pigment ye-pigment, ukwenzela ukuba i-pigment particle ihlukaniswe enye nenye ukuba ihanjiswe ngokulinganayo kwibhotile ukwenza ukumiswa kwe-colloidal . umzimba. Ukusasazeka kwee-pigment kwindawo yolwelo akuchaphazeli kuphela umbala kunye ne-aesthetics yengubo, kodwa ikwachaphazela iipropathi ezibonakalayo zokwaleka ezinje ngokunamathela, ukuhlala ixesha elide kunye nozinzo lokugcina. Nangona kunjalo, ngenxa yomtsalane omkhulu weemolekyuli, ii-pigment aggregates zomelele kwaye kunzima ukusasaza. Ukusasazeka kombala kuhlala kwenziwa kusetyenziswa i-emulsifier ephezulu yokucheba. Kwi-emulsifier ephezulu ye-shear, ulungelelwaniso lwe-pigment luxhomekeke kumandla wokucheba, amandla okusila, njl njl, ukuze amasuntswana ombala ahlakazeke ngokufanayo kulwelo oluphakathi.
Ixesha Post: Apr-01-2019
Idilesi: No.5, Zhaoxia North Rd, Shacheng St., Wenzhou ETDZ, China
Uyenza njani ipeyinti nge-shear emul ephezulu ...
Inkxaso-mali ka-2015 yeNtlalontle-Q ...
Inkxaso-mali ka-2015 yeNtlalontle - E ...
Inkxaso-mali yoLuntu yezeNtlalontle ngo-2016 - L ...
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. Uxhaso lobuchwepheshe:
Isikhokelo seMveliso - iveliso ezifakiwe - Iimpawu ezishushu - Sitemap.xml - AMP Iselfowuni